War deg deg ah:Faahfaahintii ugu dambeysey weerarkii lagu diley wasiirkii arimaha gudaha – SBC
War deg deg ah:Faahfaahintii ugu dambeysey weerarkii lagu diley wasiirkii arimaha gudaha
Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dilkii qaarajinta ahaa ee galabta magaalada Muqdisho loogu geystey ALLAHA u naxariistee Wasiirkii arimaha gudaha dawlada FKMG Marxuum C/shakuur Sheekh Xasan Faarax oo lagu dhexdiley gurigiisa.
Dilka wasiirka ayaa dhacay 4:50 daqiiqo ee galabnimo waqtiga Muqdisho waxaa dilkiisa geysatey gabar uu adeer u ahaa wasiirku oo ku nooleyd guriga taasi oo isku qarxisey.
Dilka Marxuum C/shakuur waxaa sheegtey xoogaga Al-Shabaab oo ku tilmaamay haweenayda qaraxa geysatey inay ka mid aheyd ciidamadooda, waxaana ay sheegeen inay leeyihiin masuuliyada qaarajinta wasiirka.
Wasiirka waxaa qaraxa lagula eegtey mid ka mid ah qolalka gurigiisa oo ku yiil agagaaraha Hotel Amiira ee magaalada Muqdisho, una dhaw Hotel Saxafi & Daarta Zobe, waxaa dilkiisu dhacay wax yar uun ka dib markii uu ku soo laabtey gurigiisa isagoo ka yimid madaxtooyada & goobihii ay ka socdeen banaanbaxa.
Wasiirka oo la hadlaya banaanbaxayaasha saacado ka hor dilkiisa
Intii aanu imaan gurigiisa duhurnimadii wuxuu tagey fagaaraha Sayidka ee Waliyow Cadde wuxuuna hadal uu u jeediyey dadka isu soo baxay ee ka careysnaa soo ifbixidii wararka in uu iscasilayo.
Haweenayda weerarka geystey
Ruuxa weerarka geystey waxay aheyd gabar da’deedu u dhaxeyso 20 ilaa 30 waxay aheyd qaraabada marxuumka ay nolashiisa galaafatey, isagoo u ahaa Adeer sida ay SBC u xaqiijiyeen dad xog ogaal ah.
Ilo wareed oo lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay SBC in gabadhan ay guriga marxuumka ku nooleyd mudo bilooyin ah, iyadoo la sheegay in uu isagu u yeeray ka dib markii uu soo gaarey war sheegayey in ay ku dacdareysan tahay magaalada Muqdisho.
Ilo wareedku waxay tibaaxeen in mudadii ay guriga ku nooleyd gabadhan aheyd mid dhaqdhaqaaqeeda laga shakisnaa, balse wasiirku aanu ka qaadin wax shaki ah oo ku aadan nolashiisa ama dadka la shaqeeya ama la socda.
“Waxayed aheyd gabar aamusnaan badan, had iyo jeer waxay qabtey fiig iyo dareen, ma jecleyn in ay soo dhexgasho dadka guriga ku nool, mudo ayaana laga shakisnaa waxaase adkeyd in laga qaadan karo inay ku kacdo falka ay ku dishey adeerkeed” sidaasi waxaa inoo sheegay nin ka mid ah dadka guriga ku noolaa oo codsadey inaan magaciisa la sheegin sababo uu ku macneeyey xasaasiyada warkan uu leeyahay.
Warar aynu ka helnay dad wargal ah ayaa sheegaya in gabdhan uu wasiirku u balanqaaday in uu ka dirayo magaalada Muqdisho, isagoo sheegay in uu Jaamacad u dirayo.
“Wasiirka markii aan guriga nimid wuxuu u gudbey qol ka mid ah guriga, isagoo telefoon ku hadleyey, ka dibna gabdha isqarxisey ayaa u gudubtey qolka, waxaana ay sheegtey inay doonayso inay la hadasho wasiirka, balse isla markiiba waxaan na qabsadey uuro iyo habaas uu sababey qaraxa, waxaa nala gariiray dhulka oo dhan, waxaa nagu soo daatey ciid iyo muraayadihii guriga, waxaan garan waynay waxa dhacay, ka dibna waxaan ka warhelnay wasiirka oo dhaawac ah oo dhulka yaal iyo gabadhii oo jirkeedu si xun u googa’ay, waxaana ka dib wasiirka u qaadney Isbitaalka Banaadir” ayuu yiri mid ka mid ah ilaalada wasiirka oo magaciisa ka gaabsadey in la sheego oo u waramey SBC.
Darawalka wasiirka oo lagu magacaabo Axmed Maxamed ayaa isaguna wareysi uu siiyey wakaalada wararka ee Rueters wuxuu kaga hadley qaraxaasi waxaana uu yiri “Waxaan ku sugnaa albaabka guriga, haweenay wajiga indho shareer ugu xiran yahay ayaa gudaha u gashay guriga, isla markiiba waxaan maqley qaraxa, ka dib waxaan ku arkey cadadka qofkii is qarxiyey oo aan ku arkay qayba uu degan yahay wasiirka ee guriga, waxaan u sii gudbay qolka wasiirka waxaana arkay isagoo dhulka yaal oo dhaawac xoogani uu ka muuqdo”.
“Guriga ayay imaan jirtey, waligeed wax shaki ah lagama qaadib, maba jirin wax baaritaan ah oo lagu sameyn jirey, mar kasta waxay xiran jirey indho shareer & inay wajiga daboosho, laakiin maanta waxay soo xirey suunka waxyaabaha qarxa & jaakad ay ka soo hoos gashatey jalbaabkeeda” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.